के बग्दादीको मृत्युसँगै अरब जगतमा नयाँ युगको सुरुआत हुनेछ? – विदेश प्रसारण प्रभाग अल इन्डिया रेडियो
Posted on October 29, 2019 October 29, 2019 by nepali by nepali
आईएसआईएस-को स्वघोषित खलिफ अबु बकर अल-बग्दादीको मृत्युको खबरलाई मोसुल सहरका सडकहरूमा हर्षले स्वागत गरियो। मोसुल इराकको त्यही सहर हो जहाँ सन् २०१४ मा यस तानाशाहले इस्लामिक स्टेट अफ इराक एन्ड सीरियाको स्थापना गरेको थियो। यसको स्थापनासँगै नरसंहार, सामुहिक हत्या, सामुहिक बलात्कार, सडक हिंसा, तोडफोड, अपहरण, फिरौती समेत हिंसाका अन्य कैयौँ घटनाहरू देखा परे। मोसुलबाट मात्रै ३,००,००० (तीन लाख) मानिसहरू सहर छोडेर जान बाध्य भए र हजारौँ मानिसहरूले आफ्ना प्रियजनहरूलाई गुमाए।
अल-बग्दादी आतङ्की संगठन आईएसआईएस-को टाउके थिए। पूर्वकालमा यो संगठनका अनेकौँ अवतारहरू थिए र एक समयमा यसले सीरिया र इराकको ठूलो हिस्सामाथि नियन्त्रण गरेको थियो जुन क्षेत्रको आकार लगभग संयुक्त अधिराज्य जत्रो थियो। अबु बकर अल-बग्दादीको संगठन आईएसआईएस-ले सीरियाको सभ्यतामा चोटका अनेक दागहरू पछि छोडेको छ। उसले पलमिरा सहर ध्वस्त पाऱ्यो। उसले २०१७ मा मोसुल सहरस्थित ऐतिहासिक अल-नूरा मस्जिदलाई विस्फोटद्वारा उडायो, जुन मस्जिदबाट उसले सन् २०१४ मा इस्लामिक खलिफाको घोषणा गरेको थियो। यहाँ यो उल्लेखनीय छ कि इराक र सीरियामा अमेरिकाको अगुवाइमा लडिएको युद्ध अनि सीरियाभित्र कुर्दहरूले लडेको साहसिक युद्धले नै बितेका केही वर्षहरूमा आईएसआईएस-लाई कमजोर तुल्याएका हुन्।
उसको मृत्युको खबर आउनसाथ कैयौँलाई यो आतङ्की मऱ्यो भन्ने विश्वास गर्नु गाह्रो भयो किनभने उसको मृत्युको यस्तो खबर पहिलोचोटी आएको होइन। साथै कैयौँका लागि यो खबर बेवास्ता गर्नु सजिलो थिएन किनभने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प, जसको अरब नीति मुख्यत: आईएसआईएस विरुद्ध लड्ने र यसलाई सखाप पार्ने माथि केन्द्रित हुने गर्छ, स्वयंले घोषणा गर्नुभयो कि बग्दादी “एक कुकुर र एक डरपोक” सरह मारिए। राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्नुभयो भाग्दै गएर सुरुङभित्र फसेको बाग्दादीले आफुले पहिरहेको विस्फोटक पोसाक विस्फोट गऱ्यो।
पाकिस्तानमा ओसामा बिन लादेन विरुद्धको कारबाहीमा सरह अबु बकर अल-बग्दादीलाई खतम गर्न युएस स्पेशल डेल्टा फोर्स तैनाथ गरिइएको थियो। अमेरिकाले बग्दादीको ठेगानाबारे खबर दिनेलाई २ करोड ५० लाख डलर इनाम दिने घोषणा गरेको थियो।
बग्दादी मारिइएपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय वैश्विक आतङ्कवादको परिदृश्य बग्दादी उत्तरकालमा कस्तो हुनेछ त्यो जान्न उत्सुक रहनेछ। यो स्मरण गर्नु पर्नेछ कि ओसामाको अन्त्यपछि पनि उस्तै किसिमका आशा र चिन्ताहरू उत्पन्न भएका थिए। तर आतङ्कवादी गतिविधिमा कुनै उल्लेखनीय कमी आएको थिएन। बरू अल कायदाका अवशेषहरूबाट आधुनिक समयका दुई खुँखार आतङ्की गुट, अल-नुशराह र आईएसआईएस जन्मेका थिए।
अल कायदा दुर्बल हुनसाथ आईएसआईएस शक्तिशाली गुटको रूपमा प्रकट भएको थियो। यसका कार्यकर्ताहरूले विश्वभर कैयौँ भयावह हमलाहरू गरे। बग्दादी र ओसामा त केवल अनुहारहरू मात्र हुन् जसले आफ्ना प्रशंसकहरूलाई प्रभावित पार्थे र हुकुम दिन्थे तर उनीहरू आफैले चाहिँ हामला गर्दैन थिएन। मूल नेतृत्वको भूमिका थोरै मात्र हुन्छ। आईएसआईएस विरुद्ध बहु-मोर्चीय लडाइँ जारी नै छ र यसमा केही हदसम्म सफलता हात परेको पनि छ। सीरिया र इराकमा हजारौँ आईएसआईएस लडाकाहरू पकडा परेका छन्। ती मध्ये कैयौँ युरोपेली मूलका हुन्। तिनीहरूलाई प्रत्यर्पण गरिने छ र सुनुवाई उनीहरूका आ-आफ्नो देशमा हुनेछ। अझै पनि त्यहाँ आईएसआईएस-को विचारधाराबाट प्रभावित भएका कैयौँ मानिसहरू छन्। तिनीहरूसित चाँडै निप्टिइनु पर्नेछ।
विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा आईएसआईएस-को व्यापक उपस्थितिले गर्दा मानिसहरू कट्टरपन्थी विचारहरूबाट प्रभावित भइराखेका छन्। बग्दादीको अन्त्यसँगै आईएसआईएस-को गाथा पनि समाप्त भयो भनी ठान्नुचाहिँ त्यति उचित हुने छैन। त्यहाँ शान्ति केही समयका लागि बहाल हुनसक्छ। उसका उत्तराधिकारीहरूमाझ आन्तरिक लडाइँ पनि हुनसक्छ। तर, आईएसआईएस त्यति बेलासम्म अस्तित्वमा रहनेछ जहिलेसम्म त्यहाँ राजनैतिक शून्यता र क्षेत्रमा अस्थिरता रहनेछ।
आईएसआईएस विरुद्धको लडाइँ जारी रहनु पर्छ भन्ने मत भारतको छ। मानिसहरूले आईएसआईएस आतङ्कीहरूद्वारा गरिएका अत्याचारहरू भुल्नु हुँदैन। आईएसआईएस-को मध्यकालीन विचारधारा फेरि जीवित भए, त्यहाँ विनाशको बादल छाउने छ। एक अस्थिर समयबाट गुज्रिरहेको बृहत अरब जगतको राजनैतिक प्रणालीमा विश्वासलाई पुनर्स्थापित गरिनु पर्नेछ।
आलेख: पश्चिम एसियासम्बन्धी मामिलाका विश्लेषक डा. फज्जुर रहमान सिद्दिकी